कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनः यसरी हुनेछ निर्वाचन !
काठमाडौं । ‘उत्साह, एकता, रूपान्तरणः सफल बनाऔँ १४ औँ महाधिवेशन’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपाली कांग्रेसले मंसिर २४ देखि २७ सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्दैछ । ७५ वर्ष लामो इतिहास बोकेको कांग्रेस १४ औँ महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा छ । प्रदेश अधिवेशन सकाएर कांग्रेस नेताहरु काठमाडौं आउन थालेका छन् ।
महाधिवेशनका मतदाता (महाधिवेशन प्रतिनिधि) को इन्ट्री भने २१ गतेबाटै सुरु भएको कांग्रेस निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
कति पदमा हुन्छ निर्वाचन ?
१४ औँ महाधिवेशनमा कांग्रेसले कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारीको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्दैछ । महाधिवेशनले १५ जना पदाधिकारीसहित १३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्ने छ । कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट एकजना सभापति, २ उपसभापति २ महामन्त्री र ८ सहमहामन्त्री ९क्लस्टर० बाट चयन हुने छन् ।
सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि क्लस्टर नछुट्याएको काँग्रेसले सह–महामन्त्रीका लागि भने क्लस्टर छुट्याएको छ । आठ सह–महामन्त्री पदमा महिलाबाट एक, आदिवासी जनजातिबाट एक, दलितबाट एक, मधेसीबाट एक, खस–आर्यबाट एक, थारूबाट एक, मुस्लिमबाट एक र पिछडिएको क्षेत्रबाट एकजना निर्वाचित हुनेछन् ।
महाधिवेशनबाट कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट प्रत्यक्ष ९खुला० ३५ जना निर्वाचित हुनेछ । यस्तै, महिलाबाट ८ जना, प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिलासहित ३, दलितबाट ४ महिलासहित ९ जना, आदिवासी जनजातीबाट ७ महिलासहित १५ जना, खसआर्यबाट ६ महिलासहित १३ जना, मधेशीबाट ४ महिलासहित ९ जना, थारुबाट २ महिलासहित ४ जना, मुस्लिमबाट १ महिलासहित ३ जना र पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जना केन्द्रीय सदस्य चुनिने छन् ।
यसैगरी, महाधिवेशनमा अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गताबाट एक एक निर्वाचित हुने छन् भने केन्द्रीय सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाई महिला, समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता वा अल्पसङ्ख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राखी ३३ जना सदस्य मनोनित गर्नेछ । यसैगरी, केन्द्रीय सभापतिले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्वाचित गरेका एक कोषाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
१४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने १३५ र सभापतिले मनोनित गर्ने ३३ गरी कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति १६८ सदस्यीय हुने छ ।
कुन पदमा उम्मेदवार हुन कति तिर्नुपर्छ शुल्क ?
केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुनेले ३० हजार रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्तै, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि २५ हजार रूपैयाँ तथा सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार, केन्द्रीय सदस्य पदका लागि १० हजार रूपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मतदाता नामावली प्रकाशन मंसिर २४ गते बिहान १० बजे हुनेछ । उम्मेदवारले २५ गते बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मनोनयन दर्ता गर्न सक्ने छन् ।
यस्तै, मनोनयन पत्रमाथि पर्ने दाबी विरोध, दर्ता गर्ने र जाँचबुझ गर्ने समय मंसिर २६ गते बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म रहेको छ । त्यस उपरको निर्णय मंसिर २६ गते बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म रहेको छ । उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने समय सोही दिन दिउँसो १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म रहेको छ । २६ गते दिउँसो ३ बजेदेखि एक घण्टाभित्रमा उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिनुपर्ने कार्यतालिकामा उल्लेख छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन सोही दिन अपरान्ह ५ बजेसम्म छ ।
मंसिर २७ गते बिहान ८ बजेबाट मतदान सुरु हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
मतदानका लागि भृकुटीमण्डप, राष्ट्रिय सभा गृह र पुलिस क्लबमा मतदान स्थल बनाइनेछ । १४ औँ महाधिवेशनका लागि २ सय ९३ वटा मतदान बुथ र १ हजार वटा मतपत्र खसाल्ने बक्स राखिने छ ।
१४ औँ महाधिवेशनमा १२ प्रकारका मतपत्र रहेका छन् । सभापति, पदाधिकारी, खुला केन्द्रीय सदस्य, प्रदेशबाट निर्वाचित हुने सदस्य, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गताका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र रहने छ ।